Top 5 online amathiphu ukuphola ukuphepha.
Njengoba nje in dating yendabuko, ukuphola online akusho baphathe ngayo a izingozi ezimbalwa. Kukhona Kuyohlale abantu phandle lapho izinhloso ezimbi noma eyingozi. Nakuba eziningana online ukuphola services ziye lwenteke izinyathelo screening nokuphepha ukuze Zikhipha ezinye izigebengu noma abantu abashadile, lokhu never ezingenaphutha, futhi kuba ngokuphelele ngamunye ukuze bathathe izinyathelo zokuphepha ezandleni zabo siqu.
Nanka amathiphu ukuphola ukuphepha ezinhlanu online ebalulekile ukuze uzivikela wena uma nithandana inthanethi:
1. Yenza i-akhawunti yakho ye-imeyli engaziwa. Sebenzisa a khulula imeyili akhawunti service like Hotmail noma Yahoo! ukumisa i-akhawunti ye-imeyli lowo onganikeli iluphi ulwazi lomuntu siqu. Ungayisebenzisi umsebenzi wakho imeyli noma ikheli ubonisa igama lakho eligcwele lapho bekhulumisana online ukuphola matches. Futhi, ningayeki out ikheli lakho le too ngokushesha. Kukhona abanye abantu laphaya ezisebenzisa online ukuphola services abuthele amakheli e-imeyli ibalula abangenacala ukuze bakwazi ukuthumela imiyalezo spam.
2. Nikeza cell phone yakho inombolo kunokuba inombolo yakho ekhaya lapho ucingo isigaba ukuphola online. Uma ahlelwe encwadini yocingo, enikeza out phone home yakho yocingo cishe kuyefana enikeza igama nekhaya ikheli lakho eligcwele. With ubuchwepheshe online, kulula ukuba uthayiphe inombolo yefoni ekhaya Google, futhi, uma inamba ohlwini, Igama lakho nekheli sizobonisa up kanye nenombolo yocingo. Ungase enikeza ulwazi ngaphezu ucabanga wena.
3. Hlangana endaweni yomphakathi ngezinsuku zokuqala ezimbalwa. A endaweni yomphakathi iqinisekisa ezingeni eliphakeme wokuvikeleka nokuphepha njengoba kuyoba ofakazi eziningana nxazonke kanye usuku lwakho ngeke ukwazi ikheli lakho ekhaya. Kuba Kuwumqondo omuhle ukutshela umngane lapho uzobe futhi uma kuyoba lokubuyela, uma kwenzeka nje.
4. Njalo zikhathale ubani ecela imali. Uma umuntu okhuluma ngayo ngokusebenzisa isevisi ukuphola online uqala ecela imali ngaphambi uhlangana, ungakwazi cishe ekuqinisekisa kunjalo esibhekene abaculi. Kukhona ìRussian Brideî ejensi laphaya ukuzama esibhekene amadoda abangaqaphile out of imali ngokuba abesifazane (ngezinye izikhathi abesifazane musa ngisho ngempela zikhona) cela imali amadoda for izindiza out ukubabona, kuphela zinyamalale emva bathola imali. Asikho isizathu sokuthi ukuphola online kufanele zibandakanya ukunikeza imali omunye umuntu. Uma ufuna ukuvakashela Iveta in Slovenia, fly out ukubona wakhe, musa nje imali yakhe.
5. Zithembe esiswini sakho. Uma esiswini sakho usinga ekutshela ukuthi guy a noma intombazane cha ukhuluma iqiniso yini, unezinhloso ezimbi, noma uyogcina ukuzigwaza wena, lalela ukuthi isazela. Uma uqaphela amafulegi red, ezifana ngokucindezela imininingwane yakho maduzane, bephikelela ukuba pick up wena endlini yakho for the date lokuqala, noma ukuthambekela possessive ngisho nangaphambi kokuba uhlangana, ucabange kabili mayelana nokwabelana inamba yefoni yakho, ikheli le-imeyili, noma ikakhulukazi ikheli lasekhaya. Futhi gcina iso out for kumuntu ongase kakade ashade. Uma abakaze bafuna ukuba ushayele, ngeke ukunikeza imininingwane mayelana yokuphila kwabo, futhi azame ukugcina konke secret, kukhona kungenzeka ukuthi ubhekene nani umuntu oshadile.
Khumbula ukuthi nakuba abanye dating sites alwela amasheke background, kufanele uhlale niqaphe. Abantu bangaba iphambana imifantu isheke background ukuze ungavumeli amasheke obugebengu kanye umshado uzizwe ulondekile. Dating Online kungaba indlela ephephile futhi kumnandi ukuhlangana izinga ibalula, kodwa ungalokothi izinto kalula futhi njalo unogada wakho up in the ekuqaleni.